Semalt Expert: IoT sy Boteran'ny Hopitaly sy ny olana mifandray amin'izy ireo
Ireo botnets mpanamboatra dia ampiasaina hampidina sy handefa ny serivisy sasantsasany amin'ny aterineto, toy ny DDOS (Distributed ny fandavana ny tolotra). Manolotra adihevitra amin'ny spam maro koa izy ireo. Satria tsy azon'ireo mpampiasa izany raha ny botnets mpanamboatra azy no manafika ny ordinatera, mora ho an'ny mpanjifanao ny mangalatra ny angon-drakitrao manokana izay ampiasaina amin'ny famandrihan-tratra madinika.
Nanazava i Nik Chaykovskiy, Semalt Manager Success Manager, fa ny zavatra ratsy indrindra dia ny mamorona botnets ary mivarotra izany amin'ny mpividy entana an-tserasera. Avy eo dia ampiasain'izy ireo ny botnets ho an'ireo cyber-kolikoly manerana izao tontolo izao. Ireo botnets ao IoT dia ny fitaovan'ny fitaovana fampidinana, anisan'izany ny routers, DVR, cameras, fitaovana azo itokisana sy teknolojia maro samihafa. Ny viriosy dia tratran'ny otrikaretina indrindra ary mamela ny mpanafika mifehy sy manatanteraka asa samihafa na ivelan'ny aterineto. Ny fitaovan'ny IoT rehetra dia manana safidy tsy mahasamihafa fiarovana sy toetra toy ny fahazoan-dàlana azo itokisana, fampidiram-pejy admin ary fampidirana ny serasera ho an'ny fidirana mivantana. Ny hackers dia manakorontana ireo fitaovana amin'ny alàlan'ny fampidirana herisetra mahery vaika ary hampiditra malware isan-karazany amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo na serivisy marefo.
Ahoana no hahitana raha ny PC anao dia ampahany amin'ny botnetso IoT na ianao
Mora ny mahita raha anisan'ny botnet ny solosainao ary azonao atao koa ny manombana ny fiantraikany amin'ny fampiharana ny fitaovana. Rehefa lasa fitaovana botnet ny solosaina iray, dia miasa tsikelikely izany ary tsy manao ny torolalanao. Ankoatr'izany, ireo tranonkala dia tsy mametraka araka ny tokony ho izy, ary ny rafitra fitrandrahana dia mavesatra loatra amin'ny fanontaniana maro.
Ahoana no ataon'ireny botnets ireny?
Ny botnets mpanamboatra sy IoT dia nomena andraikitra hanao asa sasany. Izy ireo dia tompon'andraikitra voalohany indrindra amin'ny fangalàhana ny mombamomba ny olona toy ny antsipirian'ny carte de crédit ary mety tsy ho hita amin'ny mpampiasa noho ny fihetsika maotina. Ireo hackers fantatra amin'ny anarana hoe botryters dia mampiasa ireto botnets ireto. Ny baiko sy ny server manara-maso dia natao hamono ireo botnets.
Ireo risika ireo dia mifandray amin'ireto botnets ireto.
1. Miondrika ho ara-dalàna izy ireo ary mandray anjara amin'ny hetsika mampiahiahy:
Ny loza ateraky ny botnets dia mitovy amin'ny mety ho fiantraikan'ny programa ratsy sy ny asa mampiahiahy ao amin'ny aterineto. Ohatra, ny botnets dia natao mba hangalarana ny mombamomba anao manokana sy hahazoana ny antsipiriany momba ny karatra. Afaka mahazo ny toetra amam-panahinao ara-tsaina, ny manga, ary ny tenimiafina ihany koa izy ireo ary indraindray manery anao hanindry ny rohy mankany amin'ireo tranonkala iombonana. Tokony ho fantatrao fa raha vao teraka ny solosainao dia tsy hanao zavatra hafa intsony izy fa hanao ny asa asaina ataon'ny hacker.
2. Tsy misy tsipika misy eo amin'ny ordinatera manokana sy ny orinasan-tserasera:
Ny tsipika misy eo amin'ny solosaina sy ny ordinatera manokana dia manjavozavo. Isika rehetra dia mety ho tratry ny aretina botnet, ary ny fomba tokana hanafoanana azy dia ny fametrahana programa fanoherana malware. Ny famantarana sy ny fampiatoana ny malware botneta dia mila miantoka ny safidinao amin'ny Internet. Avy amin'ny fomba fijerin'ny teknolojia, ny botnets dia afaka atsahatra amin'ny programa mpanohitra malware na Antivirus. Azontsika atao ny manajanona ny aretina ao amin'ny tambazotran'ny fifamoivoizana ary afaka manaisotra azy ireo tsy ho ela Source .